Muhiim waxay Somalia ka soo tahriibtay 2012 iyadoo 17 sano jir ah. Markii ay da’yar ahayd ayaa la afduubtay iyadoo lagula kacay tacadiyo ay ka midyihiin jirdil iyo fara-xumeyn taasoo ay u geysteen kooxo hubeysan oo doonayay in ay qasab ku guursadaan. Nasiib wanaag waxay ku guuleysatay in ay u baxsato Ethiopia.
Abdisalan waxa uu noqday mid kala dooranaya labo dabb markii uu Somalia ku noolaa. Dagaal ayaa ka qarxay deegaankiisa iyadoo aabihiis ay hortiisa ku dileen maleeshiyaadka Al-shabaab. Isaga oo aan aqoon meel uu aado, ayuu go’aansaday in uu isaga soo cararo Somalia inkastoo uu ogaa khataraha uu kala kulmi karo tahriibka.
Xalima oo ku dhalatay magaalada Muqdisho waxay heshiis la soo gashay kooxaha dadka u tahriibiya yurub. In kasto oo ay Xalima ku guulaysatay in timaado yurub, haddana waxay 7-dii sano ee u dambeeyey ku dhamaysatay in ay hadba wadan magan gelyo waydiisato. Nasiib darro Xaliima uma suurta gelin in ay hesho magan gelyo.
Qisada Mohamed iyo Osman
Waa maalin cadceed ah bisha September oo waxaan fadhinaa xero qaxooti oo ku taala magaalada Munich. Osman iyo Mohamed waa qaxooti Soomaaliyeed oo Germany ku kala noolaa 3 bilood iyo 11 bilood. Mohamed ayaa inta badan hadlaya halka Osman uu aamusnaanta door-bidayo.